जुलुसमा जाँदै नारा लगाउँदै हुनुहुन्छ ? होस गर्नुस् सर्ला नी कोरोना – Nepal Japan
जुलुसमा जाँदै नारा लगाउँदै हुनुहुन्छ ? होस गर्नुस् सर्ला नी कोरोना
नेपाल जापान ३२ जेष्ठ १३:०७
मन्त्रालयले लकडाउनका समयमा अनावश्यकरुपमा भीडभाड नगर्न तथा प्रदर्शन नगर्न र नगराउनसमेत आग्रह गरेको छ । पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमणको मात्रा बढ्दै गएको छ । शनिबार सााझसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच हजार ३३५ पुगेको छ । यस्तै क्वारेन्टिनमा रहेकाको सङ्ख्या एक लाख ५० हजार बढी रहेका छन् ।